UChinamasa Usethwele Amagabha Avuzayo ...
Owake waba ngumphathintambo wezemali ngesikhathi sikahulumende womanyano, osengumkhokheli webandla eliphikisayo ele People’s Democratic Party, uMnumzana Tendai Biti, ukhuthaza olesikhundla lesi okwamanje, uMnumzana Patrick Chinamasa, ukuba atshiye umsebenzi.
UBiti uthe lokhu kuzakwenza ukuthi engabi eyangiswa lokuhlambazwa ngokuphezu kwamandla akhe.
UBiti, oligqwetha elilodumo, wethule lamazwi emhlanganeni lentathelizindaba, owenzelwe emawofisini akhe, lapho akade ehlaziya khona umbiko kaChinamasa waphakathi komnyaka kwezokusetshenziswa kwemali kahulumende awethule ngolweSine olwedluleyo.
UBiti uthe ubengeke ayethule lumbiko uChinamasa okwengqondo yakhe njengoba into le yenziwa ngemva kokubonisana lezinye ingcwethi kwezomnotho, abaphathintambo bengatsha ezehlukeneyo labosibalukhu balezingatsha, eqhutshwa ngaphansi kwedale leCabinet on Economic Affairs Committee, elikhokhelwa nguMongameli Robert Mugabe.
Linkuthazo kaBiti iza ngemva kombiko osanda kwethulwa ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko, uMnumzana Christopher Mushowe, othe ulamanga uChinamasa, owethule umbiko othi kuzagunyulwa izisebenzi zikahulumende njalo akusoze kubelebhonasi yezisebenzi okweminyaka embili.
UMnumzana Mlondolozi Ndlovu, isakhamuzi seHarare, uthe ukuphikisana kwabaphathintambo kabahulumende kuyisibonelo sokuba eseyehlulekile uhulumende kaMugabe.
Lokhu ngokwesibili okwenziwe nguhulumende kulandela okwenziwa nguChinamasa ngomnyaka ophelileyo okwenza ukuthi uMugabe athi umphathintambo wayesenge ezimithiyo aze athi uhulumende kasoze enelisa ukubhadala izisebenzi ibhonasi.
Uzulu lengcwethi zenotho zithe ukwenza okunje kuveza ukuba useyehlulekile uhulumende webandla leZanu PF.
Bathi kumele kudingwe iqula labantu abazokhokhela ilizwe leZimbabwe, kokumele kubunjwe okubizwa ngokuthi yiNational Transition Authority, kuze kufike isikhathi sokuzoqhutshwa kokhetho ngomnyaka ka 2018.